HORDHACA: Barcelona vs Inter Milan+Xaqiiqooyinka Kulanka.
Thursday, April 25th, 2019 - 12:58:57
Wednesday October 24, 2018 - 10:55:22 in Wararka by
Kooxda Barcelona ayaa cwa garoonkeeda ku soo dhaweyn doonta dhigeeda Inter Milan kulamada seddaxaad ee heerka group-ka koobka Champions League.
Barca ayaa hanaan wanaagsan ku bilaabatay tartankan, halka Inter dhankooda ay guuleysteen labadii dheel ee ugu horreyay.
Garsooraha: Ovidiu Alin Hategan ( Romania )
Macalinka Barcelona Ernesto Valverde ayaa sheegay iney u baahan yihiin in si wadajira ay u shaqeyaan si ay u helaan natiijo fiican kulanka Inter Milan, la’aanta dhaliyahooda Lionel Messi.
Messi ayaa jab gacantaa uu soo gaaray kulankii sabtida ay guusha ka gaareen Sevilla horyaalka La Liga isagoo maqnaanaya dhawr todobaad.
Labada daafac ee Samuel Umtiti iyo Thomas Vermaelen ayaa dhankooda iyagana ku maqan dhaawacyo kuwaa oo aan la heli Karin cayaartan.
Inter ayaa la filayaa iney weyso laacibka qadka dhexe Belgium Radja Nainggolan, halka Marcelo Brozovic iyo Ivan Perisic uu shaki weyn ku jiro.
Nainggolan ayaa dhaawacmay intii lagu guda jiray kulankii adkaa ee Milan derby asbuucan.
Barcelona ayaa guuleystay seddax kamida lixdoodii kulan ee koobka Champions League la cayaatay Inter ( 2 barbaro iyo hal guuldarro ), kaliya guuldarrada soo gaartay waxay aheyd cayaarii lugta hore afar dhamaadka tartankan xagaagii 2009-10 oo looga badiyay (3-1).
Guri ahaan, Barcelona ayaa adkaatay afar kamida shantii cayaar oo ay la kulantay Inter dhammaan tartamada, waxaana kamida dhammaan seddax dheel oo tartanka Champions League oo aan wax goola laga dhalin. Kaliya guuldarrada garoonkooda kusoo gaartay oo ay kala kulmeen waxay aheyd koobka Fairs Cup bishii January 1970kii oo looga adkaatay (2-1).
Barcelona waa guuldarro la’aan 13kii kulan ee lasoo dhaafay koobka Champions League oo ay gurigooda kula cayaaraan kooxaha reer talyaani ( 10 guul iyo 3 barbaro), tan iyo guuldarro 2-1 oo ay kala kulantay Juventus bishii April 2003.
Inter ayaa eegeysa iney guuleysato seddaxdeeda kulan ee furitaanka koobka Champions League xagaagan kaliya markii labaad taariikhda, sido kale hore waxay u sameyeen xagaagii 2004-05.
Inter ayaa badisay labadii kulan ee lasoo dhaafay Champions League inkastoo laga dhaliyay kulamadaas goolka ugu horreya; kaliya laba koox ayaa guul badan gaaray marka goolka kowaad laga dhaliyo kulamo xariira – waa Manchester United ( oo seddax cayaar badisay November 2012) iyo Real Madrid ( oo afar kulan badisay April 2017).